Lapho ngichichima ukuzazisa, ngahlangana nomfowethu emndenini owawungihlalisile owayelawula umsebenzi. Wangibuza mayelana nomsebenzi wami, ngase ngiyiphendula imibuzo yakhe ngamunye ngenkathi ngicabanga: Uzoncoma ikhono lomsebenzi kanye nemibono ekhethekile yami. Kodwa angizange ngilindele ukuthi emva kokulalela izimpendulo zami, akazange angalinqekuzisi ikhanda nje kuphela, wathi umsebenzi wami awenele, izisebenzi azihlonyiswanga ngendlela, nokuthi angizange nhlobo ngizuze imiphumela nakanye. Ngokubona ukungagculiseki ebusweni bakhe nokulalela impendulo yakhe ngomsebenzi wami, inhliziyo yami yavele yabanda. Ngacabanga: “Uthi umsebenzi wami awanele? Uma ngingazange ngibe nemiphumela, ngakho ngingenza njani ukuze lokhu kubalwe njengemiphumela? Kumele ngabe kuhle ngokwanele ukuthi angikakawuzondi lo msebenzi obolile futhi ngizimisele ukuwuthatha, bese yena ethi angenzanga umsebenzi omuhle.” Ngangihlubukile enhliziyweni yami futhi ngizizwa ngenziwe okungafanele kangangoba izinyembezi zacishe zaqathaka. Lezo zinto ezimelene, ezingagculisekile kanye nezinenkani phakathi kimi zaqubuka ngokushesha: amandla ami akwazi ukuzuza okungaka kuphela; ngenze okusemandleni ami; ngakho ke uma ngingabenelisi okungcono bangavele bathole omunye umuntu… Inhliziyo yami yayinganethezekile impela futhi ngangilahlekelwe, ngingenasiqiniseko sokuthi kwenzekani, ngakho ngangingakwazi ukuzwa izwi alisho emva kwalokho. Kulezo zinsuku ezimbalwa, isimo sami esichichima ukuzigqaja saguquka ngazizwa nginomzwangedwa futhi ngingenamdlandla, ngasuka ekugculisekeni ngobumina uqobo lwami ngaba neisisu esigcwele ukukhonondo. Umuzwa wokulahlekelwa wangihaqa. … Kulobo bumnyama, ngakhumbula amazwi kaNkulunkulu: “UPetru wayefuna ukuba umfanekiso womuntu othanda uNkulunkulu, ukuba umuntu olalela uNkulunkulu, ukuba umuntu ovumayo ukulungiswa nokucwengwa …” (“Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo’” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kuzokwenzekani ngami? Umuntu akwenza nje ukuba angisole kancane, angitshele ukuthi umsebenzi wami awumuhle ngokwanele, ngase ngiphatheka kabi ngafuna ukuyeka umsebenzi wami. Ingabe lo umuntu uzimisele ukwamukela ukusetshenzwa acolisiswe futhi? Ingabe lokhu ukufuna ukuthanda uNkulunkulu njengoPetru? Ingabe lokhu enginakho yilokho okuvela njengozonda uNkulunkulu? Ukungafuni ukuthi abanye bathi angenzanga kahle ngokwanele nokulokhu ngifuna ukutuswa nokugqama kwabanye—ingabe lokho akukhona ukulandelela okungafanele? Ngalowo mzuzu, inhliziyo yami yaba nokukhanya okuncane, ngase ngivula Izwi Livela Lisenyameni ngase ngibona lesi siqephu: “Kungabangcono kuwe ukuba uzinikele ukwenza umzamo omkhudlwana eqinisweni lokuzazi wena qobo. Kungani ungakaze uwuthole umusa kuNkulunkulu? Kungani isimo sakho sinengeka Kuye? Kungani amazwi akho ezondeka Kuye? Niyazincoma ngokwethembeka okuncane kanti futhi nifuna ukuklonyeliswa ngokuzinikela kwenu okuncane; nibukela phansi abanye uma nikhombisa ukulalela okuncane, futhi niyamdelela uNkulunkulu emva kokwenza imisebenzana ewubala. … Ubuntu obunjengalobu benu buyacasula ngempela ukukhuluma ngabo noma ukuzwa ngabo. Yini nje efanele ukunconywa emazwini enu nezenzo zenu? … Anikutholi lokhu kuhlekisa? Ngineqiniso niyazi ukuthi nikholwa kuNkulunkulu, kodwa anikwazi ukuhambisana noNkulunkulu. Nazi kahle kakhulu ukuthi anifanelekile ngokuphelele, niyaqhubeka nokuzikhukhumeza. Anizizwa ukuthi imiqondo yenu isifike lapho isiphelelwe ngamandla okuzilawula? Kungenzeka kanjani ukuthi nina nemiqondo enjalo nizibone nifanele ukuhlangana noNkulunkulu? Ingabe manje anesabeli izimpilo zenu? Isimo senu sesivele sama ngendlela yokuthi ngeke nihambisane noNkulunkulu. Ingabe ukholo lwenu alunabo ubuthutha obumangalisayo? Ingabe ukholo lwenu alunangqondo? Uzobhekana kanjani nekusasa lakho? Uyoyikhetha kanjani indlela oyohamba ngayo?” (“Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu ayihlaba ingqikithi yami, angishiya ngingenamazwi. Ngaba namahloni kakhulu futhi ngagubuzelwa yimpoxo. Izizathu zami kanye nezimpi zami zangaphakathi zashabalala njengentuthu emoyeni. Ngalowo mzuzu, ngazizwela amandla negunya lezwi likaNkulunkulu enhliziyweni yami. Ezambulweni zezwi likaNkulunkulu, ngagcina sengizazi uqobo: Ekugcwaliseni umsebenzi wami angizange ngilwele okuhle ukuze ngizuze imiphumela engcono ukuze ngigculise uNkulunkulu, kodwa bengigculisekile ngesimo sangaleso sikhathi futhi ngizizwa ngigculisekile ngoqobo lwami. Ngehluleka ukubona ukuthi isimo sami uNkulunkulu uyasizonda, futhi ngaze ngazizwa ngenzelwe phansi ngenkathi omunye engisola. Impela bengingenalwazi futhi ngingaqondi! Bengihlala ngifuna ukutuswa ngokwenza umsebenzi omncane, futhi kuthe lapho kungasekho, wonke amandla ami anyamalala; ngimuncu nginokudinwa ngenkathi imizamo yami ingatshazwa kunokuba ithokozelwe. Ngaleso sikhathi, ngayibona ingxenye yami yobuphixiphixi. Ngabona ukuthi ukugcwaliseka komsebenzi wami kuze nezidingo kanye nezinto zokwenziwa futhi kugcwele ukungcola. Ubungewona owokwenelisa uNkulunkulu noma ukukhokhela uthando Lwakhe, kodwa ungowezinye izinhloso.
Okulandelayo：Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami